चिप्लेकिराको गतिमा रहेकाे मेलम्चीकाे काम अहिले जापानिज कार जसरी २०० काे स्पिडमा दौडिएको छ: प्रम ओली —
काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाउन कुनै समस्या नरहेको दावी गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा अन्यौलता छाएको नठान्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले एक वर्षयता तीव्रता लिएको उल्लेख गर्दै समयमै यसले पूर्णता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
बिहीबार ललितपुरको बालकुमारीमा ‘फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र’को शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वर्ष चिप्ले कीराको गतिमा अघि बढेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम एक वर्षयता जापानिज कार चिल्लो सडकमा दौडिएको जसरी दौडिएको उल्लेख गर्दै अहिले अलिकति गतिरोध आएपनि त्यसलाई समयमै पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अघि बढाउन सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले बजेट अभावको कारण देखाउँदै काम छोडेर गइरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो आयोजनाको कामलाई पूर्णता दिन ढिलाई नहुने बताउनु भयो ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन एक पाइला अघि बढने गरी सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाएको दावी पनि गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बागमती नदीलाई नुहाउन मिल्ने गरी पुरानै अवस्थामा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा स्वच्छ हावा, सफा र पीउन योग्य पानी बनाउने संकल्पप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।
चाइनाको साफबोन वाटर सर्भिस होल्डिङले सो प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ । कूल ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सो प्रशोधन केन्द्र ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्री विना मगरले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक सबै खालको सहयोग निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
जाँड–रक्सी खाने पैसाले बीमा गर्नुहोस् :धुर्मुस–सुन्तली्र
बझाङ – सामाजिक अभियान्त्ता तथा राष्ट्रिय कलाकार धुर्मुस–सुन्तली बझाङ चैनपुरमा आउने भनेपछि सदरमुकाम चैनपुर र कार्यक्रमस्थल खुल्लामञ्चमा मानिसहरुको बाक्लो भिडभाड थियो ।एकाएक खुल्ला मञ्चको स्टेजमा हास्य कलाकार सि ताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुन्जना घिमिरे (सुन्तली)ले हास्य व्यंग्य गर्दै आफ्नो कला प्रस्तुत गरेपछि दर्शकहरुको तालीको गड्गडाहट सुनियो ।बझाङ प्रवेश हुने जयपृथ्बी राजमार्ग साधुरो तथा खाल्डा–खुल्डी भएको अवस्था झल्काउँदै नेताहरुले सडक फराकिलो र सुधार नगरेको भन्दै व्यंग्य गर्नुभयो ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आयोजना गरेको बीमा जागरण कार्यक्रममा कलाकार सुन्तलीले पुरुषहरुलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘रक्सी–जाँड खाने पैसाले अब बीमा गर्नुहोस् र आफ्नो परिवार खुशी बनाउनुहोस ।’ महिलाहरुलाई भने कलाकार सुन्तलीले बिँडी–तमाखु खाने पैसाले बीमा गर्न आग्रह गरिन ।पहिलो पटक बझाङमा आएका घुर्मुस र सुन्तलीले कार्यक्रममा सहभागी हजारौं दर्शकहरुलाई जाँड रक्सी बिँडी–चुरोट खाने पैसा बचत गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
राजेश हमाल, विराज भट्ट, निखिल उप्रेती र रमित ढुंगानाको जम्काभेट, के साथमा फिल्म गर्दैछन् ?
आफ्नो जमनाका चार सुपरस्टार राजेश हमाल, विराज भट्ट, निखिल उप्रेती र रमित ढुंगाना पहिलो पटक एकसाथ क्यामेराको फ्रेममा अटेका छन् । पछिल्लो समय अभिनय यात्राबाट केही टाढा देखिएका चारै सुपरस्टारको भेट केही दिन अगाडि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा भएको हो । उनीहरुको भेट हुनु संयोग मात्र थियो वा अन्य कारण त्यो भने खुल्न सकेको छैन ।
काम विशेषले नेपालगञ्ज पुग्ने क्रममा चार अभिनेताको एयरपोर्टमा जम्काभेट भएको बुझिएको छ । भेटपछि उनीहरुले विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा सामुहिक तश्बिर खिचाएका छन् । तश्बिरमा उनीहरुलाई खुसी मुद्रामा देख्न सकिन्छ । रोचक कुरा के छ भने एक समयका कडा प्रतिस्पर्धी अभिनेता द्वय निखिल र विराज झण्डै एक दशकपछि एकसाथ एउटै फ्रेममा अटेका हुन् ।
मोवाइलको क्यामेरामा कैद भएको तश्बिर अभिनेता विराजले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा साझेदार गरेका छन् । तश्बिरसँगै क्याप्सनमा उनले अभिनेता हमाललाई आफ्नो ‘गुरु’ भनेका छन् भने निखिल र रमितलाई साथी भनेर सम्बोधन गरेका छन् । वर्षौदेखि ‘कोल्ड वार’ चलिरहेको चर्चाका बीच निखिल र विराजको जम्काभेटले उनीहरुको सम्बन्ध सुध्रिएको प्रष्टिन्छ ।
जम्काभेट भएका चार अभिनेतामध्ये राजेश, विराज र रमितले ‘हामी ट्याक्सी डाइभर’, ‘डर’ नामक फिल्ममा एकसाथ काम गरेका थिए । राजेश र विराजले ‘दादागिरी’, ‘कवच’ लगायतका फिल्ममा सँगै काम गरेका थिए । विराज र रमितले भने साथमा ‘दुर्गा’, ‘सहारा’, ‘हिम्मत’, ‘देवर बाबु’ गरेका छन् । रमित र राजेशलाई फिल्म ‘जीवनदाता’ मा साथ देखिएको थियो ।
यस्तै, अभिनेताद्वय राजेश र निखिलले ‘निखिल दाई’, ‘दशगजा’, ‘चोर सिपाही’, ‘कानुन’, ‘निशाना’, ‘दोबाटो’ लगायतका फिल्ममा साथ काम गरेका थिए । ‘जीवन मृत्यु’, ‘बरमाला’ लगायतका फिल्ममा निखिल र रमितको जोडी थियो । प्रतिस्पर्धी दुई हिरो विराज र निखिल भने ‘दोस्ती’, ‘खलनायक’, ‘अग्नी ज्वाला’ फिल्ममा आमने-सामने भएका थिए ।
एकअर्कासँग काम गरिसकेका कारण चार अभिनेतालाई फेरि पर्दामा एकसाथ हेर्ने व्यग्रता र आतुरता दर्शकको मनमा छ । चार सुपरस्टारको जम्काभेट हुनुले उनीहरुबीच सहकार्य नै नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न । तर, के अनमोल/प्रदीपको युगमा पुराना अभिनेतालाई लिएर कुनै निर्माता/निर्देशक जोखिम उठाउन तयार होलान् ? यसको भने प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पछिल्ला रिलिज दुई फिल्म ‘बागमती’ र ‘सकुन्तला’ बक्सअफिसमा असफल भएपछि अभिनेता हमालले केही समयका लागि फिल्मबाट ब्रेक लिएका छन् । बरु उनी चाँडै टिभीमा देखिँदैछन् । विराज भने आफ्नै निर्देशनमा चाँडै नयाँ फिल्म ‘सांग्लो’ बनाउँदैछन् । उता, निखिल ‘भैरव २’ को तयारीमा छन् । रमित भने के गर्दैछन्, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन ।
एजेन्सी : सौन्दर्य ताको कुरा गर्दा चाइनिज युवतीहरु अरु देश हरु भन्दा भिन्न प्रकारका हुन्छन !...